Buraannews.com » Qorshe Maamul loogu samaynayo Bay, Bakool, Gedo iyo Sh/hoose oo soconaya Home Warar
Lafo-gurka Khudbadii Madaxweyne Siilaanyo ee 22-guuradda Madax-banaanida Somaliland Sargaal Katirsan Ciidanka Kenya Oo Koox Hubaysan Ay Ku Toogatay Bartamaha Wajeer Raysul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Ayaa Lagu Wadaa In Codka Kalsoonida Loo Qaadayo Dadweynaha Magaalada Hargeysa Oo Soo Dhaweeyey Waddada Cusub Ee Laga Dhisay Caasimadda Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Oo Ka Hadlay Maleeshiyo La Sheegay In Ay Afduubtay Iyo Halka Uu Ku Sugan Yahay SOMALI LINKS
Qorshe Maamul loogu samaynayo Bay, Bakool, Gedo iyo Sh/hoose oo soconaya
December 7, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Warar aynu ka helnay meelo kala duwan oo gudaha dalka iyo dibada ah ayaa sheegaya inuu soconayo qorshe maamul loogu samaynayo afar kamid ah gobollada Koofur Galbeed Soomaaliya.
Qorshahan oo mudooyinkii lasoo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho, Baydhabo, Nairobi iyo meelo kale oo caalamka ah ayaa waxaa hor boodaya Shariif Xasan Sh Aadan oo ah gudoomiyihii hore ee barlamaanka Soomaaliya.
Shalay ayaa lagu waday in Shariif Xasan uu kasoo dago magaalada Muqdisho, hase ahataee safarkiisa ayaa dib udhacay ilaa iyo maalinta isniinta ah ee soo aadan.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in wafdi uu kamid yahay Shariif Xasan ay kulamo balaaran ku yeelan doonaan Muqdisho kahor inta aysan aadin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Qorshahan oo la rumaysan yahay in dowlada Soomaaliya ay wax badan ka ogtahay ayaa yimid kadib markii la isla garan waayay in la mideeyo lix kamid ah gobollada Soomaaliya oo kala ah Labada Jubba, Gedo, Bay iyo Bakool iyo Sh/Hoose.
Shariif Xasan Sh Aadan ayaa doonaya inuu noqdo Madaxweynaha maamulkan loo dhisayo gobollada Gedo, Bay iyo Bakool iyo Sh/Hoose.
Shirweynaha lagu dooranayo maamulkaas ayaana qorshaha uu yahay in lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
BAdweyn.com ayaa idiin soo gudbinaysa Insha Allah Wararkii ugu danbeeyay ee maamul usamayntaas Afarta gobol, Bay, Bakool, Gedo iyo Sh/hoose.